Qayladhaan Dumar 5 - Codka Ubax
Qayladhaan Dumar 5
Magacaygu waa Aamina. Dhawr sanno ka hor markii aan jaamacadda dhammeeyey, ayaan u soo guuray Afrika oo aan shaqo ka helay hay’ad caalami ah, xafiiskeeda Nairobi. Xafiiskaas waxa hoos iman jirey mashaariicda ka socda Kenya iyo Somalia/land. Mashaariicda beryahaas socday waxa ka mid ahaa mid cusub oo markaas uun codsigiisu xidhmay. Dadkii soo xaraystay, waxa ugu sarraysay gabadh reer Hargeysa ah, iyada ayaana xaq u lahayd in la siiyo.
Muddo ka dib ayaan imid magaalada Hargeysa. Gabadhii ayaannu ku kulannay Ambassador Hotel. Waannu is waraysannay. Waxa aan weydiiyay halka hawsheedii u marayso, maadaama xafiiska Hargeysa ee hay’addu uu masuul ka yahay ansixintiisa. Gabadhii waxa ay ii sheegtay arrin aan ka xumaaday. Waxa ay ii sheegtay in ninka haysta xafiiska hay’addu ku leedahay Hargeysa oo ah nin Soomaali ah, uu ka hor taagan yahay ansixinta mashruuceeda, kana rabo xidhiidh gaar ah si uu ugu ansixiyo. Waxa ay i tustay farriimihii uu u soo diray. Waxa ka mid ahaa waxyaabihii uu u soo diray, magacyo dumar kale oo uu leeyahay, kuwaasiba way oggolaadeene, miyaad ka fiican tahay? Hadalkii ugu qadhaadhaa ee uu ku yidhi waxa uu ahaa, “Naa dee waxaan ku weydiistay waa s***.”
Caddaymihii ayaan uruuriyay, waanan turjumay. Waxa aan markiiba u diray gabadhii markaa madaxda ka ahayd hay’adda oo Maraykan ahayd. Muddo kooban gudaheed, gabadhii Maraykanka ahayd ayaa u soo ansixisay mashruucii, iyada oo ka dul tallaabsatay xafiiskii Hargeysa. Bil ka dibna, ninkii ayaa shaqadii laga eryay.
Qayladhaan Dumar 4